बाइडेन र मोदीकाे बैठकका क्रममा घ’ट्यो एउटा ‘रोचक घ’टना’ !
काठमाडौं : भारत र अमेरिकाबीच सम्बन्ध सुधारका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी यतिखेर अमेरिकामा छन् । शुक्रबार प्रधानमन्त्री मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई ह्वाइट हाउसमा भेटेका थिए ।
यस दौ’रान दुई देशबीच द्विपक्षीय वार्ता सुरु हुनुभन्दा पहिले एक निकै रोचक घ’टना भयो। जब दुई शीर्ष नेताहरु भेटे, राष्ट्रपति बाइडेनले प्रफुल्ल एक हल्का अन्ताजका साथ भने कि भारतसँग आफ्नो कुनै पारिवारिक सम्बन्ध हुनसक्छ ।
बाइडेनले प्रायः आफ्नो आयरिश वंशावलीको बारेमा बोल्ने गरेका छन् । यसैक्रममा उनले भने, ‘एक आयरिश मानिसको लागि ब्रिटिश सम्बन्ध स्वीकार गर्न धेरै गाह्रो छ ।’बाइडेनले भारतीय जनताको अगाडि यो सम्बन्धको बारेमा यसअघि पनि बताइसकेका छन् । तर उनले यसपटक फेरि भने कि क्याप्टेन बाइडेन भारतमा थिए र एक भारतीय महिलासँग बिहे गरेर बसे सायद ।
यद्यपि राष्ट्रपति बाइडेनले क्याप्टेन बाइडेनका बारेमा थप विवरण दिन सकेनन् । उनले मजाकमा नै माेदीसँग भने- वा’शिंगटनमा मोदीले मलाई यसको बारेमा थप बुझ्न मद्दत गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति बाइडेनलाई भने कि उनले यसबारे केही कागजातहरु ल्याएका छन्, जसले मुम्बईसंग राष्ट्रपति बाइडेनको सम्बन्धलाई थप प्रकाश पार्नेछ ।बाइडेनले मजाक गर्दै प्रम मोदीलाई सोधे,‘के हामी आफन्त हौं ?
’प्रधानमन्त्री मोदीले पुष्टि गरे कि ४६ औं अमेरिकी राष्ट्रपति (बाइडेन) को भारतीय उपमहाद्वीपसँग पारिवारिक सम्बन्ध छ । मोदीले बाडेनलाई भने, ‘हामी यस सवाललाई अगाडि बढाउनेछौं । हुनसक्छ, यी कागजातहरु तपार्इंको लागी उपयोगी नै हुनेछन् ।’
यसका अतिरिक्त राष्ट्रपति बाइडेनले भने, ‘हाम्रो साझेदारी हामी जे गर्छौं त्यो भन्दा ठूलो छ। यो हामी को हौं भन्नेबारेमा छ। हाम्रो लोकतान्त्रिक
मूल्य, हाम्रो वि’विधता र पारिवारिक सम्बन्ध, जसमा ४० लाख भारतीय—अमेरिकीहरु सामेल छन्, तिनीहरुले अमेरिकालाई थप ब’लियो बनाउनेछन् ।’अन्तमा राष्ट्रपति बाइडेनले अर्को हप्ता आउन लागेको महात्मा गान्धीको जन्मजयन्तीप्रति लक्षित गर्दै भने, ‘गान्धीको अहिंसा र सहिष्णुताको सन्देश पहिलेभन्दा अझ बढी सान्दर्भिक भएको छ ।
२०७८ आश्विन ९, शनिबार प्रकाशित 1 Minute 76 Views